Rag Ku Eedaysnaa Dilka Xildhibaan Ibraahim Cilmi oo La Xukumay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Rag Ku Eedaysnaa Dilka Xildhibaan Ibraahim Cilmi oo La Xukumay
Rag Ku Eedaysnaa Dilka Xildhibaan Ibraahim Cilmi oo La Xukumay
April 17, 2010 - By: Abdirahman. A
Ibraahim Cilmi Warsame (AUN)
Maxkamada darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta riday xukuno kala duwan, kuwaas oo lagu riday eedeysaneyaal lagu eedeyey in ay ka dambeeyey dilkii Alle ha u naxriiste Xildhibaan ka tirsanaa Golaha wakiilada Puntland Ibraahim Cilmi Â Gaab.
Xarunta Maxkamada Â ee dacwaddu ka socotey ayaa waxaa ilaalinaayay ciidan badan oo watay gaadiid dagaal, waxaana loo diiday in ay saxaafadu si toos ah uga qaybgasho.
Dhegayso Xeer ilaaliyaha Guud ee Puntland oo aan ka waraysanay dacwadda maanta maxkmaddu qaaday [powerpress]
Xeer ilaaliyaha guud ee Dowlada Puntland mudane Maxamuud Xassan Cismaan oo maxkamadaynta ka dib u waramay Horseed Media waxaa uu sheegay in markii hore la horkeenay maxkamada ilaa 4-eedeysane, balse mid ka mid ah lasii daayay ka dib markii lagu waayay dambiga isla markaana keenay dad martiqaati ah ayadoo markii dambe la dhaariyey.
Ka dib markii ay maxkamada dhagaysatay dacwadda lagu soo oogay eedeysaneyaasha gaarayey saddex qof ayaa waxaa ay maxkamadu ku xukuntay labo ka mid ah xarig 10-sano ah, iyadoo midka kale lagu xukumay 20-sano oo xarig ah.
Xeer ilaaliyaha guud ee Puntland ayaa hadalkiisa raaciyey in eedeysaneyaashaas ay diideen eedeymaha loo soo jeediyey balse ay ku cadaatay ayadoo ay goobjoog maxkamadda ka ahaayeen ehelada Alle ha u naxriiste Â Ibraahim Cilmi Gaab.
11kii bishii November sanadkii la soo dhaafey ee 2009 ayey ahayd markii la diley rabbi ha u naxariistee Ibraahim Cilmi Warsame, waxaa dilkiisa loo qabtey 4 qof, kuwaas oo saddex kamid ah maanta la xukumay, Ibraahim Cilimi, waxa uu Golaha wakiilada ku jirey tan iyo markii Puntland la asaasey, waxaana uu ka soo galay G/mudug, waxa uu ahaa nin nabadda ka shaqeeya, waddani ah isla markaana ahaa nin cibaado badan, oo afgaaban.
Wakiilka Horseed Media
Tagged With: Dilal Qorsheysan